Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး38 Kayseriဆေးရုံ Belsin စီးတီးရထားလိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ခေါ်ဆောင်သွား
ဆေးရုံ Belsin စီးတီးရထားလိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ခေါ်ဆောင်သွား
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 38 Kayseri, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
သငျသညျရထားလမ်း alindi မှခါးဆေးရုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကို sehr
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦန်ကြီးနှင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာ Mehmet Cahit Turhan Kayseri သွားရောက်ခဲ့သည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုထဲတွင်ဝန်ကြီးရဲ့ပါဝင်မှုမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာနေဖြင့်ကျင်းပများနှင့်တည်ခင်းဧည်ခဲ့သည်နှစ်ဦးစလုံး Mamdouh Büyükkılıç'ın, Kayseri, စီမံကိန်းအပေါ်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan, မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းလေဆိပ်များတိုးချဲ့နှင့်ခါး-စီးတီးဆေးရုံရထားလိုင်းအကွောငျးပွောရ။
မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ın, ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာ Erkilet လေဆိပ်မှာကြိုဆိုကြသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးBüyükkılıç'ın Sehmus မနက် AK ပါတီလက်ထောက်အစ္စမေးလ် Kayseri Southwind အဲလစ်ကြိုဆို, တပ်တပ်မှူးဗိုလ်မှူးချုပ် Ercan Teke နှင့် AK ပါတီပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ Saban Çopuroğluလည်းရာအရပျကိုယူ။ Muhsin ချောင်း, စစ်ဦးစီးချုပ်YaşarGülerနှင့်အင်အားတပ်မှူးများနှင့်အတူဒုတိယဝန်ကြီးအမျိုးသားကာကွယ်ရေးအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာ Kayseri သို့ရောက်ကြ၏။ နှစ်ဦးစလုံးဝန်ကြီးဌာနများ၏မြောက်မြားစွာယေဘုယျမန်နေဂျာလည်း Kayseri ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
မြို့တော်မြို့တော်ဝန်Büyükkılıçဝန်ကြီးနှင့်ဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan Hulusi သူဟာအာကာ၏အစည်းအဝေးအပြီးရှင်းလင်းအပ်ပေးတော်မူ၏။ ယင်း AK ပါတီပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ Saban Çopuroğlu Briefing, လုပ်ငန်းခွင်၏မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနှင့်အကြီးအကဲများအခန်းထဲမှာဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Büyükkılıçသမ္မတ, Kayseri သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်တင်ဆက်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Mehmet Cahit Hulusi သူဟာအာကာဝန်ကြီးလည်းအစည်းအဝေးတစ်ခု Turhan ပါဝင်မှုနှင့်အတူမြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်ကျင်းပခဲ့သည်။ ပြပွဲဧရိယာအတွင်း KAYTU အပင်တွင်ကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေးကအောက်ပါသတင်းစာပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan မှထုတ်ပြန်ချက်များတွင်တွေ့ရှိရသည်။ Erkilet လေဆိပ်, မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းအား Turhan ဝန်ကြီး "Kayseri ဖို့ထိုက်တန်တဲ့စီမံကိန်းများကိုကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတည်ထောင်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လိမ့်မယ်" ဟုသူတို့ကစီမံကိန်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းဖော်ပြထားသည်ဟု၎င်းကပြောသည်။ အစာရှောင်ခြင်းမီးရထား related နူးညံ့သောပြင်ဆင်မှုဝန်ကြီးကျနော်တို့ကိုလည်းလေဆိပ်ရဲ့ချဲ့ထွင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များအရ "ကြောင်းဖော်ပြထား 2023 Turhan တစ်နှစ်၎င်း၏အလုပ်နှင့်ရည်မှန်းချက်များနေဆဲဖြစ်သည်။ အသစ်တစ်ခုကိုလေယာဉ်ပြေးလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်နှင့်လာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌စတင်သွားမှာပါ "ဟုသူကပြောသည်။ သငျသညျဗေလ-Air ကို Terminal-စီးတီးဆေးရုံ-NUH Naci Yazgan တက္ကသိုလ်-Mobilyakent ရထားဝန်ကြီး Turhan ကိုလည်းစနစ်လိုင်းအကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ချက်များကို "ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုယူပြီးများအတွက်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်ကိုပေး၏။ ကျနော်တို့လာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌တင်ဒါမှထွက်သွားရလိမ့်မည်နှင့်လျင်မြန်စွာဖြည့်စွက်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
သူကဗေလ-စီးတီးဆေးရုံရထား Protocol ကိုစနစ်လိုင်းမှတူရကီအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် 20 / 03 / 2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတရားဝင်ပြန်တမ်းရက်စွဲပါမတ်လဝန်ကြီးများအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဗေလ-စီးတီးဆေးရုံရထားစနစ်လိုင်း 16 အားဖြင့်လုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဇာတ်စင်တဦးတည်းကိုပိုမိုအရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်၏ပြီးစီးပြီးနောက်အင်အားသုံးသို့ရောက်ကြ၏။ မြို့တော်ဝန် Mustafa Celik, တူရကီသွား, အရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ပြီးတော့အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ General Manager Erol Çıtakအတူ protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Mustafa Celik, တူရကီ ပို. ပို. အဆိုပါရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan နှင့်အတူခဏပြောခဲ့တယ်။ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်သံမဏိအခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှနိုင်ငံတော်သမ္မတကဖန်ဆင်းအဆက်အသွယ်များ၏အရေးအပါဆုံး ...
ဓါတ်ရထားလိုင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာစတင်သငျသညျဗေလ-စီးတီးဆေးရုံ 27 / 04 / 2018 Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တစ်ပိုအဆင်ပြေမြို့ပြဘဝနှင့်ချောမွေ့စွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေဆဲဖြစ်သည်။ Mustafa Kemal Boulevard, ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi Kocasinan Boulevard နှင့်လည်းဇာတ်လမ်းယခုပြီးတော့လုပ်ဖို့အရည် Boulevard Interchange Osman Kavuncu ထပ်တိုက် Boulevard လမ်းဆုံများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်။ စီးတီး Terminal နှင့်များ၏ရှေ့မှောက်၌ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်လမ်းဆုံပုံပြင်များအတွက်တင်ဒါထွက်ပါမည်။ မြူနီစီပယ်ဇာတ်လမ်းကိုမလြော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းဆုံနေဆဲဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်တစ်လအကြာမှာတော့ Mustafa Kemal Pasha ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard အာဇာနည်နေ့အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်စေမည်အကြောင်း, Boulevard ဖလှယ်မှုန်ဆောင်မှုများဖွင့်လှစ်လာမယ့်လစဉ်အခြေခံအုတ်မြစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Aydogan Aydin Interchange နှင့် Fuzuli ထားကြ၏ ...
ဓါတ်ရထားလိုင်း OK ကိုအတည်ပြုချက်အဘို့အ Belsin စီးတီးဆေးရုံ 05 / 09 / 2019 Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ မြို့ပြရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်၏နှစ်သိမ့်တိုးမြှင့်မည်သည့် Mamdouh Büyükkılıç'ın, လိုင်း၏အရေးပါသောရှင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Büyükkılıçသမ္မတ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဗေလ-စီးတီးဆေးရုံအားဖြင့်လုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏လက်မှတ်ဖြတ်သန်းမျဉ်းကြေညာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်Büyükkılıçလိုင်းရိပ်သာလမ်းသူသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ပတ်သက်ပြီး Tala-Asik Veysel ထုတ်ပြန်ချက်များ, နှစ်ဦးစလုံးလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးမကြာမီစတင်မည်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားခဲ့ကြသည်။ မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ın, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသစ်ရထားလမ်းလိုင်းများ၏သတင်းကိုပေး၏။ Belsin-စီးတီးဆေးရုံသမ္မတ Mamdouh Büyükkılıç'ınမျဉ်းသား, လိုင်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏ဆောက်လုပ်ရေးကိုလက်ခံရရှိ "ဟုအဆိုပါ 6,8 Belsin-terminal ကို-စီးတီးဆေးရုံ-NUH Naci Yazgan တက္ကသိုလ်-Mobilyakent လိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံန်ကြီးဌာနကီလိုမီတာ ...
ရင်ပြင် Antalya - လေဆိပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏ Expo ရထားလိုင်းစီမံကိန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရရန် HPC ကအတည်ပြုခဲ့သည် 02 / 07 / 2015 AYGM Antalya ရင်ပြင်မှာ - လေဆိပ် - သစ်ကိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. "ကုန်စည်ပြပွဲရထားလိုင်း - လေဆိပ် - - ဇာတိမှာ Aksu Square ကို" နှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသော HPC ၏ကုန်စည်ပြပွဲရထားလိုင်းစီမံကိန်းညွှန်ကြားမှုအထွေထွေကျင်းပလိမ့်မည်သောစီမံကိန်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ် (AYGM) ကိုခေါ်ဆောင်သွားခံရရန်အခြေခံအဆောက်အဦရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, အမြင့်စီမံကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှာကောင်စီ (HPC) မှစီမံကိန်းယူလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အရာရှိတွေကသူတို့အလုပ်ကိုပြီးစီးပြီးနောက်တင်ဒါထွက်ထားသည်ကိုမှတ်သားခြင်း, လေလံယနေ့ခေတ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်အလုပ်စတင်မည်ဟုဆိုသည်။ ရရှိနိုင် 11,1-ကီလိုမီတာပထမအဆင့် Kepez - ထိုလမ်းရထားလိုင်းကို၏ဆက်လက်အတွက်ရရှိလာတဲ့။ အဆိုပါလေဆိပ်နှင့်မြို့ကုန်စည်ပြပွဲဤစီမံကိန်း ...
2016 တစ်နှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှာအမိမြေ Kayseri Tala ခရိုင်ရထားလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါခေါ်ယူ 31 / 12 / 2015 Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Tala အမိမြေကမ်းခြေရထားလိုင်းစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ 2016 နှစ်ပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းအသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု "ရထားလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးဖို့လိုင်းစနစ် Tala အမိမြေဒေသမှရှိရင်းစွဲရထားများအပြင်" rile လိမ့်မယ် Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်ကျင်းပခဲ့သည် ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, 2016 နှစ်ပေါင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်£ 2.000.000 ဖြစ်လိမ့်မည်။ တိုးတက်မှုအတွက်လိုင်းအလုပ်၏လမ်းကြောင်းများနှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်6ကီလိုမီတာရှည်လျားသည်စီမံကိန်းဖြစ်လိမ့်မည်မြှို့နယ်ကပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။ ရရှိသောခံရနိုင်သည် Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် (0352 222 89 60 လျ) အနေဖြင့်ကြော်ငြာ၏ထုတ်ဝေပြီးနောက်သတ်မှတ်ချက်များ။ ကိုးကားစရာ: ...
တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မျှော်မှန်းသည့် 2020 တစ်နှစ်တာအဲယားဘတ်စ်, 2,5 ဘီလီယံအတွက်
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: 21 အိန္ဒိယမွတ်စလင်ဂျာနယ်လစ် ekimxnumx ...
ဓါတ်ရထားလိုင်း OK ကိုအတည်ပြုချက်အဘို့အ Belsin စီးတီးဆေးရုံ
ရင်ပြင် Antalya - လေဆိပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏ Expo ရထားလိုင်းစီမံကိန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရရန် HPC ကအတည်ပြုခဲ့သည်
2016 တစ်နှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှာအမိမြေ Kayseri Tala ခရိုင်ရထားလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါခေါ်ယူ
ရင်ပြင် Antalya - လေဆိပ် - Expo ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရထားလိုင်းစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့်တိုင်ပင်
ရင်ပြင် Antalya - လေဆိပ် - ကုန်စည်ပြပွဲရထားလိုင်းစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန '' ypk ထံမှထင်မြင်ချက်များများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်စီမံကိန်းယူနိုင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (369) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)